नेपालमा टाउको दुख्ने समस्या बढ्दो - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
काठमाडौं । नेपालमा टाउको दुख्ने समस्या बढ्दै गएको छ । खासगरी व्यस्त जीवनशैली, समस्याग्रस्त समाज र देशको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा परेको प्रतिकूल प्रभावले टाउको दुख्ने समस्या बढ्दै गएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । नेपालमा अधिकांश व्यक्तिमा टाउको दुख्ने समस्या रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो समस्याका कारण मानिस जटिल समस्यासम्म पुग्ने गर्छ ।
मानिसको दैनिक जीवनयापनमै यो समस्या देखा पर्ने हुन्छ । टाउको दुख्नका लागि केही कारण आवश्यक पर्छ भने केहीलाई कारण विना नै टाउको दुख्ने हुन्छ । केहीको ठाउको एक–दुई घण्टाका लागि दुख्छ भने केहीलाई दिनभर दुख्छ । केहीलाई महिनौंसम्म दुख्ने हुन्छ भने केहीलाई एक–दुई घण्टामा सन्चो हुन्छ ।
नेपालमा जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई टाउको दुख्ने समस्या छ । आजभोलि बालबालिकामा समेत यो समस्या देखिन थालेको छ । युवायुवती सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन थालेका छन् । खानपान, जीवनशैली, वातावरण लगायतका विभिन्न कारणले युवायुवतीमा यो समस्या बढी देखिन थालेको छ । केहीको दुखाई एकदुई दिनमा निको हुन्छ भने केहीलाई वर्षौंसम्म उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्सकीय रिपोर्टमा सामान्य देखिए पनि टाउको किन दुख्छ ? तनाव र माइग्रेनका कारण नेपालमा धेरैलाई टाउको दुख्ने हुन्छ । न्यूरोलोजिष्ट डा. प्रदीप पाण्डेले टेन्सन हेडेकका कारण धेरैमा टाउको दुख्ने समस्या रहेको बताउँछन् ।
विभिन्न प्रकारका तनावका कारण टाउको दुख्ने समस्या भएमा त्यस्तो टाउको दुखाइलाई टेन्सन हेडेक भनिने डा. पाण्डेको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा वर्षांैदेखि ठाउको दुख्ने, टाउकोको सबै भाग दुख्ने, भारी भएजस्तो भएर दुख्ने लक्षण देखिएमा यसलाई टेन्सन हेडेक भएको मानिन्छ । टाउको दुख्ने समस्याले अरु असर धेरै पु¥याउँछ । चक्कर लाग्ने, टाउको हल्लाउनसमेत समस्या हुने, तनाव बढ्ने, निदाउन नसकिनेजस्ता समस्या देखिन्छ । टेन्सन हेडेकलाई औषधिले समेत असर गर्न समस्या हुन्छ ।
टाउको दुख्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण माइग्रेन हो । टाउको बल्किने, दुखेपछि निरन्तर लामो समयसम्म दुखिरहने, बान्ता आउने तथा आइहाल्ला जस्तो हुने, टाउको दुखेपछि सुत्नैपर्ने हुने समस्या देखिएको अवस्थामा यो माइग्रेन हेडेक भएको हुनसक्छ । कतिपयलाई घाम र आवाजले समेत टाउको दुख्ने हुन्छ । माइग्रेन भएकालाई हिंडडुल गर्दासमेत टाउको दुख्ने हुन्छ । कहिलेकाहीं एकपाटो मात्रै दुख्ने हुन्छ । माइग्रेन भएकालाई सुतेर उठेपछि निको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा खानेकुरा र आनीबानीमा नियन्त्रण मुख्य समस्याको समाधान हो ।
टाउको दुखाइको अर्को कारण जटिल अवस्थामा हुनसक्छ । जस्तो नशासम्बन्धी समस्या, मस्तिष्कसम्बन्धी समस्याले गर्दा पनि टाउको दुख्छ । यस्तो अवस्थामा जोडसँग दुख्ने, ज्वरो आउने, बान्ता नै हुने, बिहानै पनि दुख्ने अवस्था आएमा जटिल कारणले टाउको दुखेको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । कुन कारणले टाउको दुखेको हो, त्यही कारणको उपचार गर्नु उपयुक्त हुने डा. पाण्डेको जोड रहेको छ । आम नेपालीको समस्या भएकाले धेरैलाई कारणअनुसार नै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।